Khilaafka 'HirShabelle' Oo Cirka isku Shareeray iyo Cosoble Oo Gobolka Cusub Magacaabay [Warbixin].
Thursday August 17, 2017 - 13:02:26 in Wararka by Super Admin
Xiisado siyaasadeed oo aad udaran ayaa lagasoo sheegayaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe maalmo kadib markii gole baarlamaan ay shaqadii ka eryeen Cali Cabdullaahi Cosoble oo ku magacaawnaa madaxweynaha maamulka HirShabelle.
Erayo kulkulul ayay warbaahinta isku dhaafsanayaan mas’uuliyiinta maamulka isku magacaabay HirShabelle kuwaas oo mid walba uu sheeganayo in uu yahay sharci!.
Cali Guudlaawe oo xilligii Xasan Sheekh Maxamuud soo noqday guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe ayaa ku dhawaaqay in uu si KMG ah usii hoggaamin doono maamulka Hirshabelle isagoo sheegay in uu kalsooni ka heysto Baarlamaanka iyo Golaha wasiirrada.
Cali Cabdullaahi Cosoble oo isna dib ugu laabtay Jowhar ayaa soo saaray wareegto uu ku sheegayo in gobol cusub uu uga dhawaaqay bartamaha dalka Soomaaliya wuxuuna ballan qaaday gole wasiirro oo cusub in uu soo dhisi doono.
Cosoble ayaa sheegay in gobol loogu magac daray Shabeellaha Sare lagusoo daray gobolka Hiiraan arrinkaas oo umuuqda mid uu isaga fujinayo cadaadiska dhanka siyaasadda ah ee uga imaanaya dowladda Federaalka.
Gobolka Hiiraan ayaa laba qeyb loo kala qeybiyay iyadoona Tuulooyin gobolkaasi katirsan degmooyin laga dhigay.
Sida lagu sheegay wareegtada kasoo baxday Hoggaamiyihii hore ee HirShabelle gobolka Hiiraan degmooyinkiisa ayaa noqonaya sidan:-
Beled Weyne, Feerfeer,Matabaan,Farlibaax,Ceel-Cali, Halgan iyo Maxaas waxaana xarun u ah
magaalada Beled Weyne.
Sidoo kale Hoggaamiyihii xilka laga xayuubiyay ee HirShabelle ayaa magacaabay gobol Cusub oo loogu wangal Shabeellaha Sare kaasi oo ka kooban degmooyin iyo deegaano laga gooyay gobolka Hiiraan wuxuuna ka koobanyahay sidan Buula Burde,Moqakaro,Jalalaqsi,Buurweyn iyo Buq’aqable waxaana xarun u ah Buula Burde.
Tallaabadan ayaa ah mid cirka kusii shareeraysa khilaafkii u dhaxeeyay maamulka dabadhilifka ah ee Gabre iyo Xasan Gurguurte ay dhiseen waqti hadda laga joogo 11 bilood, magaalada Jowhar waxaa la sheegay in ay la ciir ciirayso ciidamo iyo siyaasiyiin doonaya in midba midka kale uu ka awood roonaado.
Magacaabista Cosoble ee gobolka Cusub waxay ka dhigantahay in uu ka maarmay gobolka Sh/dhexe oo sida Muuqata Guudlaawe iyo siyaasiyiinta ku fikirka ah ay uharayaan.